दोहोरी साँझमा काम गरेको २–३ वर्षपछि ‘सेकेन्ड ह्याण्ड’ स्कुटर किनेर संघर्ष गरेका प्रकाश सपुतले कलाकारिताबाट नै किने ४९ लाखको कार, शोरुम बाटै बुबाआमालाई चढाएर पुगे दक्षिणकाली दर्शन गर्न ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 6, 2021 AdminLeaveaComment on दोहोरी साँझमा काम गरेको २–३ वर्षपछि ‘सेकेन्ड ह्याण्ड’ स्कुटर किनेर संघर्ष गरेका प्रकाश सपुतले कलाकारिताबाट नै किने ४९ लाखको कार, शोरुम बाटै बुबाआमालाई चढाएर पुगे दक्षिणकाली दर्शन गर्न ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
‘गलबन्दी च्यातियो तिम्ले तानेर’ गितबाट देशविदेशमा परिचित भएका गायक प्रकाश सपुतले आफ्नो पहिलो कार खरिद गरेका छन । उनको ‘दोहोरी ब्याटल’, ‘बोल माया’, ‘गलबन्दी’, ‘बदला बरिलै’ हुँदै ‘मेरो पनि होइन र यो देश ?’ गित सुपरहिट नै बने ।
अझै मेहेनत गरेर त्यसको केही वर्ष उनले ‘सेकेन्ड ह्याण्ड’ मोटरसाईकल किनेका सपुतले अन्तत आफ्नो सपनाको कार किन्न सफल भएका छन । गाडी किनेपछि गायक सपुतले खुसि साट्दै सामाजिक संजालमा लेखेका छन – ‘सपना, संघर्ष, सिर्जना, सफलता मेरो ! साथ, सहयोग, शुभेच्छा तपाईहरुको । सपना देख्नेहरुलाई हौसला हुनसक्छ – “ कलाकार मात्रै भएर पनी कार चढ्न सकिन्छ है। “
जिवनको पहिलो गाड़ी ।’ जीवनको पहिलो कार खरिद गरेपछि उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो समेत बनाएर राखेका छन । भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस: